Lalatiana Rakotondrazafy – Mahery Lanto Manandafy : Tonga eny amin’ny zandary ny raharaha -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Rakotondrazafy – Mahery Lanto Manandafy : Tonga eny amin’ny zandary ny raharaha
Lalatiana Rakotondrazafy – Mahery Lanto Manandafy : Tonga eny amin’ny zandary ny raharaha
20/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Rahampitso no voantso eny amin’ny zandarmaria etsy Betongolo i Mahery Lanto Manandafy ,taorian’ ny fitoriana izay napetrak’i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andriatongarivo Andry. Raha ny fantatra dia noho ny fanalam-baraka azy ireo tamin’ ny tambazotran-tserasera sy fanelezana vaovao tsy marina no antony. Marihina etoana fa efa fomba fanaon’ny roa tonta izao manao “harcèlement” izao mba ahazoana vola etsy sy eroa matoa navoakan’ingahy Mahery Lanto ny vaovao, satria dia nanaiky izany rahateo ity izay notoriana ity. Manaporofo ihany koa izany fa efa fomba fanaon’ny MLE sy ry Mahery Lanto Mandafy io, matoa vaky bantsilana sy efa mirantiranty imasom-bahoaka ny resaka. Izay ihany koa no antony mampitabataba an’i “Minus’’ kely, izany hoe Andry Andriatongarivo, satria sao very ny fihinanana. Raha ny zava-nisy anton’ny fitoriana , dia nanao ampamoaka i Mahery Lanto Manandafy tamin’ ny pejiny eo amin’ny tambazotra sosialy mikasika ny vola izay noraisin-dry Lalatiana Rakotondrazafy sy ry Andry (Minus) . Nahatsiaro afa-baraka kosa ny ankilany noho ny fivoahan’ny marina, satria dia ny manakiana sy milaza ny tsy mety ataon’ny mpitondra hatrany no ataony eo amin’ny onjam-peony, kanjo niarahan’ny rehetra nahalala ny nafenina.
Raha tena nisy namoaka vaovao diso noho izany, tsy ilay resaka navoakan’ny gazetin-dry Lalatiana Rakotondrazafy mikasika ny hoe fanorenana trano mitentina amina miliara ,voalaza fa an’ny filohan’ ny antenimiera ve no tena diso, io izay nandadiladizan’izy ireo, sy nitond ran’izy ireo fifonana. Hiaraha-mahalala ny toetran’i Manandafy Mahery Lanto fa tsy mora mivadika nefa dia niarahana niasa, ka izao navoakany izao ny raharaha maloto. Ny azo lazaina aloha dia te hanakona mafy ny hadisoany tamin’ ny fanafoanana ny vaovao tsy marina, izay vao haingana ry Lalatiana Rakotondrazafy, ka tiany hifona eo anetrehany ihany koa i Mahery Lanto Manandafy. Izany tokoa ilay hoe ny atao atao ihany fa ny ataoko aza jerena, samy mamoaka vaovao izao ihany, saingy ny iray tsy marina velively satria azo porofoina fa ity an-dry Lalatiana ity kosa mety ho marina, nefa dia izao nametrahana fitoriana izao. Ho sahirana ihany i Mahery Lanto Manandafy satria aorian-dry Lalatiana, dia ny fikambanana politika MLE, izay samy hifanampy amin’ny serasera mikasika ity raharaha ity. Manandafy zanany kosa ankilany mandeha amin’ny honjohonjony samy irery , sy iny loha be izay lanjainy iny.
Nandray fanapahan-kevitra ny CENI : Soloina ireo mpikambana anaty biraom-pifidianana
Marc Ravalomanana : « Tsy tokony hihemotra ny fifidianana »